Nguruve kebab recipe kumba | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Kutaura chokwadi, ndinoda kubika. Uye hapana mufaro mukuru kwandiri kana ndiro raive kuravira kwemhuri yangu. Mune ino kesi, ini ndinoedza kufunga nezve ese nuances eresipi uye ndobva ndanyatso kuteera iwo marepi chaizvo kuti mhedzisiro ive yakanaka zvakare.
Saka pamusoro pemakore aya ndakagadzira nzira yekubikisa nyama yenyuchi uye nzira yekuigadzira. Izvo zvandinoda kugovana izvozvi. Kubva pane izvo zviripo pamusika: nyama yemombe, nyama yenguruve, gwayana, huku, tinoda nyama yenguruve zvakanyanya. Iwe unofanirwa kutora clipping. Sezvo munzvimbo ino nyama haina tambo uye inonyanya kukodzera kubika muzvidimbu zvakakura. Ndakacheka zvidimbu zvakafanana zve cubic zve 3 ne 3 masentimita muhukuru. Nyama inofanira kubviswa.
Mushure mekucheka, ndakaiisa mupani yesimbi isina chinhu ine vhoriyamu ye2-3 malita uye ndikasasa munyu uye mhiripiri kuravira. Ini ndinosanganisa zvakanaka ndokuisa chirongo munzvimbo imwechete mayonnaise "Provencal". 180 gramu yakakwana. Chinhu chikuru ndechekuti zvidimbu zvese zvakaputirwa zvishoma nemayonnaise. Uye ndinoisiya mufiriji kwemaawa akati wandei. Zvakanaka, ngatiti, mangwanani tinobikira manheru.
Zvakanakira zvidhinha mukubika bhengi
Ipo nyama ichinyoroveswa, ini ndinokuudza nezve grill. Yakanakisa, mumaonero angu, bhengi ikatanda yakaiswa pasi kubva pazvidhinha zvakaiswa kumucheto. Mukati meiyi rectangle yezvidhinha zvisere, ini ndinovaka moto. Ini ndinotora huni dzebirch. Izvo zvinokwanisika pamwe nekuwedzeredzwa kweashoma aspen matanda. Huni dzinofanira kutsva chose, kuita marasha. Kana rimwe kana maviri embers asingatsve, ini ndinoabvisa kubva kune iyo grill yenguva inotevera. Mune ino kesi, zvidhinha zvinodziya mushe, zvichiburitsa infrared kupisa. Ndosaka ndichida nzira iyi kune yesimbi barbecue.
Ndeipi nzira yakanakisa yekubatidza moto wekutsva nyama
Ini handishandisi marasha ekutengesa nekuda kwekuda kwekushandisa mvura yekudziya. Ndine chokwadi chekuti hapana utsi hunokuvadza hunosara. Zvichida kuzviisa pasi, ini handizopokana. Sezvaunonzwisisa, ini ndinogara mumba mega, uye nzvimbo yeyiyi saiti inokutendera kuti uite moto pakati pebindu. Asi nguva pfupi yadarika ndanga ndichipisa marasha mune chitofu chekare chesauna. Iyo yakagadzirirwa kubika mbatatisi yehuku muzhizha. Zvakachengeteka nenzira iyi.
Kugadzirira nyama yenyuchi
Uye saka, masango akapotsa atsva, hapana rimi guru. Muhafu yeawa, marasha anenge agadzirira. Unogona kuenda netambo nyama pane skewers. Ndine flat skewers uye mativi maumbirwo. Ini ndinofanira kutaura ipapo kuti izvo zvakapfava zviri nyore kwazvo. Icho chokwadi ndechekuti ivo vanofanirwa kuve vachichinjaniswa nguva nenguva nemadhigirii makumi masere. Uye ne triangular skewers zvinosvika zvisiri nyore kudaro. Ndakavatenga ndisina kufunga ipapo ipapo. Uye zvakazoitika mukuita. Uye ndine zvakapfava, zvakagadzirwa pamba.
Ini tambo chete nyama pane skewers. Ini handishandisi hanyanisi, matomatisi, nezvimwe. Izvi zvese zvinoshandiswa zvakasiyana nedhiri rakapedzwa. Chinhu chega chandinoita dzimwe nguva kuita tambo zvidimbu zvidimbu zvebhekoni pakati pezvimedu zvenyama uye zvakanyanya kusimbisana. Zve juiciness. Ini ndinoedza kugadzira yekutanga (yakanyanyisa) zvidimbu zvidiki. Ivo vanowanzo kubika zvishoma zvishoma. Kune zvimwe zvese, hapana huchenjeri. Kunze, pamwe, imwe. Kana chidimbu chechimiro chakareba chakauya, saka, chokwadika, tinoiboora pamwe chete. Zvekuti kana pakubika hakurembere zvakanyanya. Zvese zvatinotakura kuenda ku brazier. Usachemedze kubata bhodhi rekucheka se fan. Kuita kuti marasha atambe zvinonakidza, dzimwe nguva iwe unofanirwa kutyaira mweya pamusoro pawo. Uye mudziyo mudiki wemvura yakachena. Kana marasha edu akasununguka. Open moto haibvumidzwe! Infrared radiation chete.
Fry nyama yenguruve kebab - recipe
Isu tinoregedzera marasha pese pese pese chebibiji uye nekuisa skewer ine gapfu shoma kubva kune mumwe nemumwe. Tinonzwa hunhu hunhu. Isu tinoona kuti hapana moto wakashama. Fukidza neimwe mvura kana zvichidikanwa. Mushure memaminetsi gumi, tendeuka madhigirii makumi masere uye unomirira imwe maminetsi gumi. Zvichakadaro, nhengo dzemhuri dziri kugadzirisa tafura: chingwa nemiriwo zviri kutemwa. Kebab inofanira kudyiwa ichipisa. Nekupisa, sekutaura, nekupisa! Kudya kwakanaka.
Uye usakanganwa kudzima moto. Kuchengeteka kunouya pakutanga!
Minced kebab (kebab): yekubika
Kebab - chii ichocho? Nzira yekubika, chii chekushandira nacho?
Inonaka Yakabikwa Pike: Instant Recipe
Inonaka uye ine muswe pike muvheni
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 2,162 masekondi.